Jack Headphone iPhone Tsy Miasa? Ity ny The Fix! - Iphone
sim tsy nanohana iphone 5s
ny fomba hifandraisana amin'ny fivarotana app
vavaka mba handeha tsara ny fandidiana
mangatsiaka ny efijery iphone 5-ko
taratasy famelana heloka momba ny fifindra-monina
Jack Headphone iPhone Tsy Miasa? Ity ny The Fix!
Ny jack headphone dia tsy mandeha amin'ny iPhone-nao ary tsy fantatrao ny antony. Natsofokao ny findainao ary nanomboka nilalao hira ianao, nefa tsy maheno na inona na inona ianao! Amin'ity lahatsoratra ity dia hanazava aho maninona no tsy mandeha ny jack-n'ny iPhone anao ary asehoko anao ny fomba fanamboarana ny olana .
Tapaka ve ny iPhone Headphone ahy?
Amin'izao fotoana izao, tsy azontsika antoka raha tsy mandeha ny jack-n'ny iPhone na tsia noho ny olan'ny lozisialy na ny olana momba ny fitaovana. Na izany aza, zava-dehibe ho anao ny mahafantatra fa olan'ny rindrambaiko afaka sakano tsy hiasa tsara ny jack anao an-doha. Ka alohan'ny handraisanao ny iPhone ao amin'ny Apple Store dia miasà amin'ny alàlan'ny dingana famahana olana etsy ambany!
Mba hitsapana ny olana mety hitrangan'ny lozisialy dia andramo alefa ny iPhone. Ny famonoana ny iPhone sy ny fiverenanao indraindray dia mety manamboatra olana rindrambaiko madinidinika satria ny programa rehetra mandeha amin'ny iPhone dia mety manidy ary mamerina voajanahary.
Mba hamonoana ny iPhone dia tsindrio ary tazomy ny bokotra herinaratra. Aorian'ny segondra vitsy dia ho hitanao ny 'slide to power off' ary misy kisary kely misy herinaratra miseho eo amin'ny efijery. Swipe ny kisary herinaratra avy eo ankavia miankavanana mba hamonoana ny iPhone.
akanjo prom mora vidy any Etazonia
Andraso eo ho eo amin'ny 15-30 segondra, avy eo tsindrio ary tazomy indray ny bokotra herinaratra. Afaho ny bokotra herinaratra rehefa miseho eo afovoan'ny fampisehoana iPhone ny sary famantarana Apple.
Atsaharo ny volanao amin'ny iPhone
Raha mampiditra headphone ao anaty iPhone ianao, saingy tsy maheno feo mandeha ianao, dia mety hivadika hatrany ambany ny volanao amin'ny iPhone.
Tsindrio ny bokotra fanamafisam-peo eo amin'ny ilany havia amin'ny iPhone hahalavorary ny volony. Rehefa manao izany ianao dia hisy popa kely hipoitra eo afovoan'ny fampisehoana iPhone izay manondro ny habetsaky ny iPhone.
Rehefa miseho ilay boaty dia tadiavo zavatra roa:
Alao antoka fa milaza izany écouteur eo an-tampon'ny boaty. Izany dia manamarina fa ny findainao dia nahatsikaritra fa ny headphone dia tafiditra ao.
Hamarino tsara fa misy bara volume eo ambanin'ny boaty. Raha milaza izany Mampanginina , avy eo ny audio dia tsy hilalao amin'ny headphones.
dikany ara-panahy ny hala mandady aminao
Raha tsy mipoitra ny boaty iray rehefa manendry ny bokotra volume ianao dia sokafy ny fampiharana Setting ary Feo & Haptics . Avy eo, alefa eo akaikinao ny switch Miova amin'ny Buttons .
Andramo ekipa finday roa hafa
Azo atao izany fa tsy misy zavatra tsy mety amin'ny jack an-telefaona amin'ny iPhone-nao. Fa kosa, mety misy ny olana amin'ny fantson'ny findainao.
Andramo atsofohy ao anaty kapila findainao iPhone ny headphone iray hafa. Afaka mandre feon-kira ve ianao izao? Raha miara-miasa amina feon-telefaona iray ny feo fa tsy ny iray hafa, dia ny lohan-tsikonao no miteraka ny olana - milamina tsara ny «headphone»!
Hizaha raha misy audio mandeha amin'ny toerana hafa
Na dia ampidirina aza ny headphone anao dia mety hisy ny filalaovana feo amin'ny alàlan'ny fitaovana hafa toy ny headphone na mpandahateny Bluetooth. Raha mifandray amin'ny fitaovana Bluetooth ny iPhone-nao rehefa nampiditra ny headphones anao ianao, dia nanomboka nilalao tamin'ny alàlan'ny fitaovana Bluetooth ny audio fa tsy ny headphone anao.
raha vaky ny efijery iphone-ko
Ho an'ny iPhones mihazakazaka iOS 10 na antitra
Raha mandeha ny iPhone-nao iOS 10 , sokafy ny Center Control amin'ny alàlan'ny fampiasana rantsan-tànana hikosehana ambany avy eo ambanin'ny fampirantiana. Avy eo, swipe miankavia-miankavia mba hijerena ny fizarana playback audio an'ny Control Center.
Avy eo, kitiho ny iPhone eo amin'ny farany ambanin'ny Control Center ary alao antoka fa misy marika fanamarinana eo akaikiny écouteur . Raha eo akaikin'ny zavatra hafa ny marika fanamarinana dia tsindrio fotsiny écouteur mifamadika. Raha tsy mahita safidy Headphones ianao na dia tafiditra aza ny headphone anao, dia mety hisy olana eo amin'ny sehatry ny fitaovana miaraka amin'ny jack headphone na ny plug eo amin'ny fakan-tsaronao.
Ho an'ny iPhones mihazakazaka iOS 11 Na Vaovao
Raha mandeha ny iPhone-nao iOS 11 na vaovao kokoa , sokafy ny Center Control amin'ny alàlan'ny fikitihana etsy ambany ny efijery. Avy eo, tsindrio ary tazomy ilay boaty audio eo amin'ny zoro havanana ambony amin'ny Control Center.
Avy eo, kitiho ny kisary AirPlay ary alao antoka fa misy marika fanamarinana eo akaikiny écouteur . Raha eo akaikin'ny fitaovana hafa ny marika fanamarinana dia azonao atao ny mifamadika amin'ny headphones amin'ny alàlan'ny fanoratana amin'ny Headphones.
Diovy ny Jack Headphone
Lint, gunk, ary potipoti-javatra hafa miraikitra amin'ny jack headphone dia afaka manakana ny iPhone tsy hahalala ny telefaoninao izay tafiditra ao. Raha tsy mandeha amin'ny iPhone-nao ny kapila, dia makà borosy anti-static na borosy nify vaovao ary diovy ny telefaona jack
Tsy manana borosy anti-static? Zahao Amazon izay ahafahanao mividy a borosy enina fonosana enina fonosana azonao ampiasaina hanadiovana soa aman-tsara ireo seranana amin'ny iPhone.
Raha mila torohevitra tsara kokoa momba ny fanadiovana ny jack an-telefaona amin'ny iPhone dia jereo ny lahatsoratray inona no hatao rehefa raikitra ao anaty maody finday ny iPhone-nao !
sary famantarana paoma avy eo lamba mainty
Fanamboarana ny Jack Headphone
Raha efa niasa tamin'ny dingana etsy ambony ianao ary tsy mandeha ny kapila findainao iPhone, dia mety hisy olana eo amin'ny sehatry ny fitaovana amin'ny iPhone. Raha rakotra drafitra AppleCare ny iPhone-nao dia ento any amin'ny Apple Store anao eo an-toerana izany - ataovy izay hahazoana antoka mandamina fotoana aloha !
Olana Jack Headphone: raikitra!
Nametraka ny olana amin'ny jack headphone amin'ny iPhone ianao ary afaka manomboka mankafy ny mozika tianao sy ny audiobooks tianao indray. Manantena aho fa hizara ity lahatsoratra ity amin'ny media sosialy ianao mba hanampiana ny namanao sy ny fianakavianao raha tsy mandeha ny jack an-telefaona iPhone. Raha manana fanontaniana hafa ianao dia anontanio izy ireo ao amin'ny faritra misy hevitra etsy ambany!